မြန်မာ့အရေး: အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေမည့် မြစ်ကြီးဧရာဝတီ နှင့် ဘယ်သူတွေ ဘာလုပ်နေကြသလဲ... ???
အခုတစ်လော အရမ်းပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေတဲ့ ဧရာဝတီကြီး အသက်ငင်နေပီတို့ ဧရာဝတီကို ကယ်တင်မယ်တို့… ဟုတ်ကဲ့ ဘာတွေ ဖြစ်လို့ ဧရာဝတီကြီးက အသက်ငင်နေတာလဲဆိုတာကို မေးတော့…..
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုတစ်ချို့လူတွေက မြစ်ကြီးပိတ်ပြီးဆည်ဆောက်မှာတဲ့ တစ်ချို့ကလဲ ပြောသေးတယ်..
နေရာအတိအကျမသိပဲ မြစ်ဆုံမှာ ဆည်ဆောက်မှာတဲ့ တစ်ချို့ကလဲ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်မို့ မရင်းနိုင်ဘူးတဲ့… တစ်ချို့ကလဲ မြစ်တိမ်ကောလာပြီး မြစ်ကြောင်းထဲက ငါးတွေ သေမယ်…
သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ ရှုံးမယ်တဲ့၊ တစ်ချို့ကလဲ ဘာပဲပြောပြော ဘယ်လိုပဲ ရှင်းပြ ရှင်းပြ သူတို့က ဧရာဝတီမြစ်ကြီး သေမယ်ဆိုတာချည်းပဲ… အောင်မယ် Save The Irrawaddy ဆိုပြီး တီရှပ် ထုတ်ရောင်းစားလိုက်သေးတယ်… ပြီးတော့လဲ ပြောကြသေးတယ်… သူရဲကောင်းတွေပေါ့... များလိုက်တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ မြန်မာမှာ သူရဲကောင်းတွေ ပေါတာ တကယ် မယုံမရှိနဲ့... ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ကယ်ကြမယ့် သူရဲကောင်းတွေ အလျှိုအလျှိုပဲ... သူတို့ကပြောကြသေးတယ် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးသေရင် မြန်မာပြည် ဒုက္ခရောက်ပီတဲ့ ကယ်တင်ရမယ်တဲ့… သူတို့ပဲ သိတယ်ပေါ့လေ… မသိရင်… သူတို့က သူရဲကောင်းတွေပေါ့… ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာ ခံသူကြီးတွေပေါ့… တကယ်တော့ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ မြစ်ဆုံနဲ့ လေးမိုင်အကွာ ဆည်ရဲ့ စီမံကိန်းမှာဆိုရင် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ပိတ်ပြီးဆည်ကြီး တည်တာမဟုတ်ဘူး… အဲဒီအတွက် ကာတွန်းတွေ ရေးဆွဲထားသလို လုံးဝကြီး ပိတ်ဆောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး… ဧရာဝတီမြစ်မှာ စီးဆင်းတဲ့ရေရဲ့ ၇% ကိုပဲ ဖမ်းပြီး အသုံးပြုမှာပါ… ကျန်တဲ့ ၉၃% ဆက်လက်စီးဆင်း နေတဲ့အတွက် မြစ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းက မပြောင်းလဲ ပါဘူး… ရေနည်းနည်းပဲ အလျော့လေးပဲ ရှိတာပါ… ဒါက ဆည်အတွင်း ရေ ၇% ကိုတဖြည်းဖြည်း သိုလှောင်နေစဉ် အတွင်းပါ.. တကယ်လို့ ဆည်ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေတိုင်းကိရိယာအရ ဆည်ရေ ပြည့်သွားပီ ဆိုရင် လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ ဂက်စ်တာဘိုင်လို့ ပြောတဲ့အတွက် ဂက်စ်ထည့်ပြီး အဲဒီရေနဲ့ ထည့်မောင်းလိုက်ရင်အဲဒီရေက မြစ်ထဲကိုပုံမှန်အတိုင်း ပြန်စီးသွားပါမယ်။ အဲဒီနောက်မြစ်ကြောင်းကို
ပြောင်းစေမယ့်ဟာတွေကဘာတွေရှိလဲ ဟုတ်ပီ… ရေစီးကြောင်းတွေပြောင်းသွားပြီး မြစ်ကမ်းကို သွားတိုက်စားရင်မြစ်ကမ်းပါးပြိုမယ်မြစ်ပြင်ကျယ်လာမယ်.. မြစ်တိမ်ပြီး သောင်ထွန်းလာမယ်.. ဒါကြောင့် မြစ်ရေကို ဆည်ထဲကို သိုလှောင်ဖို့ ရေသွင်းမြောင်း ချတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြစ်ထဲကိုတိုင်တွေ ချမယ့် နေရာမှာ.. ရေစီးကြောင်း မပြောင်းလဲမဲ့နေရာ တွေကို တိုင်းတာပြီး ဆောက်လုပ်မှာပါ.. နောက်ပြီး အောက်ခံ မြစ်ပြင် တိုက်စားပြီး တခြားနေရာတွင် အနည်ပို့ချကာ မြစ်ကြောင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းမဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ဆည်ကနေ ၀ုန်းကတဲ့ ရေထွက်တဲ့အခါ အောက်က အောက်ခံမြေသားတွေကို တိုက်စားမသွားအောင်လဲ တည်ဆောက်သွားမှာပါ… နောက်တစ်ခုက.. ဧရာဝတီမြစ်ထဲကို ဒီ မေခနဲ့ မလိခမြစ်လေး နှစ်သွယ်ကနေပြီး စီးဆင်းလာတဲ့ ရေတစ်ခုတည်းနဲ့ အမှီပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ ရှင်သန်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး… မြစ်ကြီးငါးသွယ်နဲ့ မြစ်ငယ်ချောင်းငယ် အသွယ်သွယ်တို့နဲ့ စီးဆင်းရှင်သန်နေတာဖြစ်ပါတယ်… နောက်ပြီး တခြား မြစ်ကြောင်း ကျယ်ပြီး မြစ်ရေတိမ်ကာ သောင်မထွန်းစေဖို့ ကမ်းပါးတွ မပြိုစေဖို့ စသည်တို့ကိုလဲ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ နိုင်ငံတော်က အစီအစဉ်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါတယ်… ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ညွှန်ကြားထားတာပါ… (ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၏ မိခင်ဌာနဖြစ်သည့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်းသာ ဆောင်ရွက်ရန်မဟုတ်ဘဲ မြစ်ကြောင်းများ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန တို့အပြင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး ဖြစ်သည့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီတို့ ပူးတွဲ၍ဆောင်ရွက်သွားရန်) ဆိုတဲ့ မြစ်ကြောင်းကြီးတွေကို မပြောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းအကောင် အထည်ဖော်ပေးမယ့် အစီအစဉ် ရှိပြီး အဖွဲ့တွေဖွဲ့ကာ ဆောင်ရွက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်…. ကဲအဲဒါဆို ဧရာဝတီကို နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိအောင် အသုံးချပြီး ဘယ်သူတွေ ကာကွယ်မှုတွေလုပ် ကယ်တင်ပြီး ဘယ်သူတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကယ်တင်နေသလဲ ဘယ်သူတွေ စီးပွားရေးတွေလုပ်နေသလဲ ဘယ်သူတွေ ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် လုပ်နေကြသလဲ… ဘယ်သူတွေ ပြည်သူတွေကို လမ်းပေါ်ထွက် အသေခံကြအောင် လုပ်နေကြတာလဲ ဘယ်သူတွေ လုပ်စားနေကြတာလဲ??? ဆိုတာ သိလောက်ပါပီ…
Posted by မြန်မာ့အရေး at 1:48 AM